Filtrer les éléments par date : dimanche, 05 décembre 2021
dimanche, 05 décembre 2021 11:05
Betafo - Vakinankaratra : Misesisesy ny fanolanana zaza tsy ampy taona
In-droa mifanesy ny tranga fanolanana zaza tsy ampy taona taty Betafo, Vakinankaratra tao anatin’ny herinandro monja. Ny iray ny Alarobia 01 Desambra teo, izay zazavavy 7 taona no niharan’izany tao amin’ny Fokontany Atsimontsena, ary dia ny raikeliny no nahavanon-doza. Efa eo am-pelantanan'ny manampahefana ny raharaha.
Zoma 03 desambra, izany hoe : roa andro taorian’izay, tao amin’io Fokontany io ihany, dia niantso vonjeo fa naolan’ny raikeliny (vadin’ny mamany) ny tovovavy izay, 16 taona. Ny olona manodidina no naheno vonjeo ka dia niantso ny andrimasom-pokolonona. Avy hatrany dia nandray ny andraikitra ireto farany ka dia nitondra ny raharaha teny anivon’ny mpitandro filaminana ao Betafo.
Nandritra ny fanadihadiana ilay zazavavy no nahalalana fa efa in’efatra amin’izao no nanaovan’ity raikeliny ity izao fanararaotana ara-nofo izao izy. Nitaraina hatrany tamin’ny reniny izy saingy tsy nohenoina, ny reniny rahateo koa tsy mba nampandre ny mpitandro filaminana akory.
Nalefa haingana ao Antsirabe moa ity raikely nahavanon-doza ity mba hiarovana ny ainy, satria tena efa tsikaritra fa tena romotra ny vahoaka, ary efa maro no nitangorona manodidina ny biraon’ny Commissariat Betafo.
dimanche, 05 décembre 2021 10:54
Amoron'i Mania : Miisa 13 ireo tranga Covid voamarina
Araka ny fampahafantarana nataon-dRtoa Radaloson Mamiarisoa, Goverinoran’ny Faritra dia miisa 13 ireo tranga voamarina fa voan’ny Covid ao Amoron'i Mania, ankoatra ireo marary tsy mbola manao fitiliana sy ireo fakana singa mbola iandrasam-baliny.
Sady nanentana ny olona samy hitandrina ny ekipa notarihiny, no nitety ireo tsena izay ifamezivezen'ny olona betsaka, nizara arovava.
5 décembre : Journée mondiale du bénévolat.